Ny fampitsaharana ireo hetsika rehetra manomboka amin` ny mitatao vovonana dia tsy manampy azy ireo amin` ny asany mihitsy. Tsy ampy azy ireo ny ora hiasana ka zara raha misakafo. Tsy misy ny vola ahafahana manjifa ny « vary mora »eny amin`ny fokontany misy azy ireo. Mampatsiahy moa ny mponina eny an-toerana fa tokatrano 30 monja no nahazo ilay “trano-conteneur”, natolotry ny fitondram-panjakana, kanefa maherin` ny 240 isa izy ireo. Maro amin' ireo tsy manan-kialofana no iharan'ny hanoanana sy orana amin`ny alina. Nampatsiahivin` izy ireo hatrany fa mbola tsy mahazo rano fisotro madio ihany koa izy ireo satria tsy manam-bola ahafahana manjifa eny amin`ny “borne fontaine” natokana ho an` ny besinimaro.